Shiinaha warshad biyo-sireed leh iyo kuwa alaab-keena | Gelken
Collagen Hydrolyzed si ballaaran loogu isticmaalay cunno ahaan loogu daro hilibka si loo wanaajiyo jilicsanaanta unugyada isku xira; loo isticmaalay emulsifier in waxyaabaha caanaha laga sameeyo; lagu dabaqi karo dhammaan noocyada wax soo saarka bolse; loo isticmaalay sidii filim xirmo ah miraha la keydiyey; walxaha dusha sare ee cuntada.
Waxyaabaha ceyriin ee ugu weyn ee loo yaqaan 'collagenzed collagen' waa lafaha iyo haragyada lo'da, kalluunka, doofaarrada iyo xayawaannada kale. Waxay hodan ku tahay nafaqada waana sahlan tahay in la nuugo. Sidaa darteed, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa cabitaannada tamarta iyo cuntada, baararka nafaqada, xalalka maqaarka ee ka hortagga gabowga iyo kaabista cuntada.Kolajiin biyo leh waa fududaanta loo yaqaan 'collagen' oo loo kala qaaday unugyo yar oo borotiin ah (ama peptides collagen) iyada oo loo marayo habka loo yaqaan hydrolysis. Qeybahaani yar yar ee borotiinka ayaa sidaas sameeyakolajiin biyo leh si fudud ugu milmi kara cabitaannada kulul ama kuwa qabow, taas oo ka dhigaysa mid heer sare ah oo ku habboon in lagu daro qaxwaha subaxa, smoothie, ama boorashka. Unugyadan yar ee borotiinka ah sidoo kale way kuu fududaan karaan inaad dheefshiido oo aad nuugto, taas oo macnaheedu yahay in amino acidsku waxtar ku yeelan karo jirka.
Kolajiin biyo leh (HC) waa koox peptides ah oo miisaankoodu hooseeyo molecule (3-6 KDa) oo lagu heli karo ficil enzymatic ee aashitada ama warbaahinta alkaline ee heer kulka gaar ahaanta. HC waxaa laga soo saari karaa ilo kala duwan sida bovine ama porcine. Ilahaani waxay soo bandhigeen xaddidaadyo caafimaad sannadihii la soo dhaafay. Cilmibaaris dhowaan waxay muujisay astaamaha wanaagsan ee HC ee laga helay maqaarka, qiyaasta, iyo lafaha laga helo ilaha badda. Nooca iyo halka laga soosaarayo ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee saameeya guryaha HC, sida miisaanka kelli ee silsiladda peptide, xallinta, iyo waxqabadka firfircoon. HC waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhowr warshadood oo ay ka mid yihiin cuntada, dawooyinka, qurxinta, biomedical, iyo warshadaha maqaarka.
Hore: Kalluunka Collagen Peptide
Xiga: Gelatin Hydrolyzed